1953-1967 Evinrude Johnson 3HP Tune UP Project Part Numbers sy ny Cost | Outboard Boat Motor Repair
1953-1967 Evinrude Johnson 3HP Tune UP Project Part Numbers sy ny Cost
Hitako fa ny fivarotana fivarotana kojakoja fiara NAPA dia nanolotra katalaogin-dranomasina ary ny nahagaga ahy dia manana ny faritra marin-dranomasina ilaiko izy ireo ao amin'ny tahiry ao amin'ny Ivotoerana fanapariahana NAPA eo an-toerana. Ny magazay momba ny fiara hafa CarQuest dia manana ny "Sierra Marine Parts Catalog" izay zavatra mitovy amin'ny isa ampahan'ny mitovy amin'ny ampiasain'ny NAPA. Ny fitadiavana izay ampahany ilaina dia zava-tsarotra, saingy raha vao fantatro izay nilaiko dia afaka nahazo ny ampahany haingana i NAPA. Ianao koa dia te-hahita mpivarotra ranomasina tsara OMC Johnson / Evinrude ary Mercury faritra mpivarotra. Tsy tiako ny mividy entana amin'ny mpivarotra sambo ary mandoa ny vidin'ny fivarotana lafo any aminy, saingy misy faritra an-dranomasina izay azonao aleha ihany. Betsaka ny toerana eo amin'ny tranonkala, saingy mila matoky ianao fa fantatrao fa izay novidianao no tena ilainao. Ny olan'ireto mpivarotra ireto dia ny fironany hivarotra kojakoja amina motera maro karazana.
Miantsena manodidina amin'ny alàlan'ny fanindriana ireo tranonkala voatanisa ho amin'ny ankavia. Mikaroha ny Nomeran'ny OMC ary ampitahao ny vidiny.
Voatanisa eto ambany ireo ampahany ampiasaina amin'ny fanamafisana ny moto sambo HP 1963 Evinrude Lightwin Outboard 3 ahy. Misy vintana tsara fa ireo faritra an-dranomasina ireo no ilainao amin'ny motera anao, saingy tokony hamarininao ny isa ampahan'ny motera ivelany anao.
Total Cost for Parts: $ 96.62 miampy Tax ao amin'ny Napa
Coils (mila 2 amin'izy ireo) OMC Part Number 582995 na 584477, NAPA / Sierra Part Number 18-5181
Manohana ny tranonkala:
Tsindrio eto raha hiantsena ho an'ity anjara amin'ny Amazon.com
Tsindrio eto raha hividy ity ampahany ity amin'ny ebay.com
Ignition Tune-Up Kit Fizarana OMC Laharana 172522 NAPA / Sierra Fizarana Isa 18-5006
Tompon-daka J6C Spark Plugs
kilalaon'afo Plugs Champion J6C
Head Gasket OMC Fizarana laharana 203130 NAPA Fizarana laharana 18-3841-1